यसरी भएको थियो मानवको उत्पत्ति र विकास - khulla Post
नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि २० मंसिर २०७८, सोमबार १३:२६
बिश्व माटो दिवसको दिन आज पनौतीमा बृहत माटो जाँच शिविर कार्यक्रम सम्पन्न (भिडियो सहित) १९ मंसिर २०७८, आईतवार १९:३९
अनेकोटको सिर्जना प्राथमिक बिद्यालयमा अभिभावक भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न १५ मंसिर २०७८, बुधबार २०:३४
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा ब्रिगेड ब्वाइज क्लब र एनआरटीको खेल बराबरीमा रोकियो १३ मंसिर २०७८, सोमबार १७:४२
ओमिक्रोन भेरियन्टको सम्भावित जोखिम कम गर्न अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक १२ मंसिर २०७८, आईतवार १९:२६
ओमिक्रोन भेरियन्टको जोखिम बढ्यो, नेपाललाई पूर्वतयारी गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह १२ मंसिर २०७८, आईतवार १८:५५
काभ्रेको नमोबुद्धमा नेकपा माओवादीको तेस्रो नगर सम्मेलन सम्पन्न १२ मंसिर २०७८, आईतवार १५:०१
कांग्रेस काभ्रेको जिल्ला सभापतिमा तिर्थ लामा विजयी, सबैलाई समेटेर लैजाने हुमागाईको भनाई १२ मंसिर २०७८, आईतवार १२:०४
admin १९ चैत्र २०७५, मंगलवार ११:४२ 3461 Views
अध्यात्मवादी चिन्तनले पृथ्वीमा जीवको उत्पत्ति कुनै अलौकिक शक्ति वा ईश्वर बाट भएको थियो भन्ने मान्यता वर्तमान समयमा त्यो झुठ हो भन्ने सवित भईसकेको छ । हिन्दु दर्शन, ईसाई दर्शनका विरुद्धमा A.J. Oparin ले सन् १९३६ मा आफ्नो किताब “The Origin of Life” मा यो कुराको पुष्टि गरेको छ कि आज भन्दा करिब ५०–६० करोड बर्ष पहिले पृथ्वीमा अवस्थित कार्वन, हाईडेजन, नाईटेजनका यौगिक, विभिन्न खनिज पदार्थ र अत्याधिक तापको उपस्थितिमा ब्रोथ (Broth) तयार भएको र त्यहि ब्रोथबाट प्रोटिन बनेको उल्लेख गरिएको छ । प्रोटिका ईकाइहस् मिलेर भाइरस, ब्याक्टेरिया जस्ता अविकसित जीवको उत्पक्ति भयो । ती जीवहरु पानीमा बस्थे । वायुमण्डलमा अक्सिजन थिएन । अत : यी जीवहरु खानाको रुपमा अरु रसायनमा निर्भर रहन्थे । जीवमा हरितकणको विकास पछि वायुमण्डलमा रहेको कार्वनडाइ अक्साइड र पानीको सहायताले ग्लुकोज र अक्सिजन बनाए ।
वायुमण्डलमा अक्सिजन ग्याँसको उपस्थिति भए पछि मात्र अक्सिजनमा बाँच्ने एक–कोषीय जीवको विकास भएको हो । एक–कोषीय जीव अथवा प्रोटोजोआ (Protozoa) बाट पोरिफेरा,(Porifera) हुँदै सेलेन्टेरेटा (Coelenterata), प्लेटिहेमिन्थस, (Platyhelminthes) निमाटोडा, (Nematoda) एनिलिडा, (Annelida) आर्थोपोडा, (Arthopoda) मोलस्का, (Mollusca) इकाइनोडरमाटा, (Echinodermata) प्रोटोकर्डाटा, (Protochardata) साइक्लोस्टोमाटा, (Cyclostomata) पाइसिस, (Pisces) उभएचर (Amphibia) , सरिस्रिप (Reptilia), एभ्स (Aves) र स्तनधारी (Mammalia) सम्म करोडौ वर्षमा विकास भएको हो भन्ने तथ्य चाल्र्स रोवर्ट डार्विनले त्रmमविकासको सिद्घान्तमा देखाउनु भएको छ । पेरिपेटस (Peripatus) , भन्ने जन्ने जन्तुले एनिलिडा र आर्थोपोडाको गुण देखाउँछ । प्लेटिपस (Platypus) जन्तु स्तन धारी भएर पनि अण्डा पार्छ । आर्कियोपेट्क्सि (Archeopteryx) पंछी हो तर पनि उसमा सरिस्रिपका गुणहरु पाइृन्छन् । यी सम्बन्धहस् किन रहे? चरा, चमेरो, ब्हेल, घोडा, मान्छेका हात तथा खुट्टाका हड्डी किन एउटै प्रकारको भए? प्रोटोप्टेरस (Protopterus) भन्ने माछाले सुख्खा मौसमा फोक्सोले स्वास फेर्छ । प्रोटोजोआ देखि स्तनधारी जीव सम्म कोषको विभाजन प्रत्रिmया एउटै छ । प्रोटोजोआ देखि स्तनधारी जीव सम्म टइपसिन (Trypsin) इन्जाइमको किन एउटै काम भयो ? किन जीवको विकास चाहे एककोषीय हास् वा बहुकाषीय, सधै एककोषीय जाइगोट (Zygote) बाट मात्र भयो ? यी सब तथ्यले के कुरा स्पष्ट पार्छ भने मानवको विकास त्रmम–विकासको सिद्धान्तमै आधारित छ । त्यसो भए मानवको सब भन्दा नजिकको पूर्खा कौ हो त ? बाँदर –
हो बाँदर ।
चाल्र्स डार्विनको यो विचारले त्यतिखेर (सन् १८५९) संसारभरी नै हलचल मच्चायो । उनको विचारलाई ईसाइ धर्मका पादरीले पागलपनाको संज्ञा दिए तर, तथ्य तथा विज्ञानसम्मत तर्कहरुको आधारमा व्यक्त गरिएको डार्विनको विचारले विश्वमा चाँडै नै ब्यापक स्प लिन थाल्यो । मानवशास्त्रीका अनुसार बाँदर तथा अपुच्छ (Apes) अर्थात् गोरिल्ला, गिब्बन्स, चिम्पाञ्जी, ओराङ्गओटाङ्ग जस्ता जन्तुहरु आज भन्दा छ करोड ५० लाख वर्ष पहिले रुखमा जीवन बिताउँथे । तर पछि आएर ती अपुच्छ समुदायहरु मध्येको एक प्रजाति रुखबाट तल ओर्लेर जमिनमा जीवन व्यतीत गर्न थाल्यो जसलाई सिलोपिथेकस (Silopithecus) नामले चिनिन्छ । यो जीव आजको सानो बाँदरको आकार थियो । दुई खुट्टाले हिड्ने प्रयास गर्थे । सिलोपिथेकसबाट डयोपिथेकस (Dryopithecus =Procosul) २ करोड ५० लाख वर्ष पहिले उत्पत्ति भएको अनुमान गरिएको छ । यी जीवहरुसंग मानवका गुणहरु कम थिए । यसर्थ यी जीवहरुलाइृ होमिनिड (Homonides) भनिन्छ, जुन समुदायबाट मानवीय गुण भएका प्राणीको जन्म भयो ।
प्रथम पटक मानवका गुणहरु स्पष्टसंग देख परेका नरबानर एस्ट्ेलोपिथेकस (Austrialiopithecus) को उत्पत्ति करीब ३० लाख वर्ष पहिले भयो । थुप्रै जीबावशेष अफ्रिकाको सुख्खा भुमिमा पाएका र यी जीवहरु बस्तुहरु समात्न हातको प्रयोग , इसाराद्धारा विचारको आदानप्रदान र शिकार गर्न ढुङ्गा, लठ्ठीका प्रयोग गर्थे । दिमागी क्षमत ४५०–६०० CC सम्म भएका यी नरवानरको स्थायी बसोबस थिएन । र यो क्रम होमो हेविलस (Homohabilus) सम्म कायम रह्यो । होमो हेविलसको दिमागी क्षमता ७०० CC छ यसर्थ पनि यो जीव एस्ट्ेलोपिथेकस भन्दा बढी चतूर र सु–संस्कृत हुनु स्वभाविक छ । खुल्ला घाँसे मैदनमा सिधा उभिएर हिड्ने यी जन्तु शिकारका लागि कच्चा ढुङ्र्गाका औजारहस् बनाउन जान्थे । यो अवधि करीब आज भन्दा २० लाख वर्ष अघि सम्म थियो । यो जंगली युगको निम्न चरणमा पर्छ जहाँ प्रकृतिमा पाईने बस्तुको जस्ताको तस्तै प्रयोग गरिन्थ्यो । जंगली युगको मध्यचरणमा मात्र होमो इरेक्टस (Homo eroctus) ले आगोको आविस्कार र भाषाको विकास गरे । रुखका हाँगा ल्याई छाप्रा बनाएर सुरक्षित भएर बस्ने सीप भएको प्राणीले परिवारको विकास ग¥यो । नदिको प्रवाह र समुन्द्रतह हुँदै आफ्नो जंगली अवस्थामा पनि पृथ्वीको अधिकांश भागमा बसोबास गर्ने काम भयो ।
पूर्व जाभामा उत्खन्नबाट प्राप्त पिथेक्यानटेपस (Homoerectus pithecanthropus) हात – हतियारको निर्माण गर्न सक्षम रहेको पुष्टी भएको छ । यसको दिमाग क्षमता ९०० CC थियो । यिनको स्पष्ट चिउँडो थिएन तर आँखी भै आधुनिक अपुच्छको जस्तो थियो । पेकिङ्ग गुफाबाट उत्खनित होमो इरेक्टस सिनेनटेपस (Homo erectus sinanthropu) ज्यादै चतुर र दुरदर्शी स्वभावको थियो । यसको दिमागी क्षमता १०७५ CC थियो। उत्खनन्बाट प्राप्त १४ बर्ष मुनिका बाल–बालिकाको मात्र अवशेष पाइनाले के स्पष्ट हुन्छ भने यी जीवको आयु ज्यादै कम भएको हुनुपर्छ । २ लाख ५० हजार देखि ३ लाख ५० हजार वर्ष पहिले सु–संस्कृत मानव होमो सेपियन्स (Homo sapiens) को विकास भयो । समाजको विकास, श्रमको विभाजन, धर्म र संस्कृतिको विकास यस समुदायबाट भएको थियो । यो जंगली युगको उन्नत चरण हो । जहाँ जंगली पशुपंक्षीको मासु यी मानवको स्थायी भोजन पदार्थ बन्न गयो र शिकार मानव श्रमको एक सामान्य क्षेत्रको रुपमा परिणत भयो । बचाउ र शिकारको लागि औजारको प्रयोग हुन थाल्यो । धनु, ताँदी र वाण जस्ता अस्त्रहरु निकै परिस्कृत थिए, जसको अनविष्कारको लागि निकै लामो अवधिदेखि संचित अनुभव तथा अति तीक्ष्ण बुद्धि एवंम् यथेष्ट मानसिक क्ष्मताको आवश्यकता थियो । होमो सेपियन्स नेल्डर थाइलेन्सिस (Homo Sapiens neanderthalesis) करीव १ लाख ५० हजार वर्ष सम्मको समयमा युरोपमा र एसियामा रहेका थिए । दिमागी क्षमता आधुनिक मानव (१६०० CC) को दाँजोमा थियो (१४५० CC)। एसियामा विकसित अर्काे प्रजाति क्रो –म्याग्नन (Cro–magnan) को दिमागी क्षमता करीब १६०० CC थियो ।
आधुनिक मानव भन्दा सु–संस्कृत र तेजिलो दिमागका यी जन्तु परिवारका साथ गुफामा बस्थे । रंगीन चित्रकला कोर्न जान्ने र पछि गुफाबाट बाहिर निस्की जमीनमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ भन्ने मावनशास्त्रीको मान्यता रहेको छ । ठूला संख्यामा छोपिएका मानव कंकालहरु भेटिएबाट नेण्डरथालहरु आफ्ना मानिसहरु मर्दा प्रेम र दुःखका साथ दाहासंस्कार गरी मुर्दालाई जमीनमा गाड्ने गर्थे । सम्भवतः यहि समय देखि मानवमा धार्मिक आस्थाहरुको जन्म भएको हुनुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गरिने अर्थात् उनीहरुको शरीरमा रहने उपरोक्त चीजलाई उनीहरुको लाशसंगै गडिन्थे । यसको प्रमाण इजिप्टमा अवस्ति पिरामिडमा रहेको ममी (Mummy) संगको गर–गहनाले पुष्टि गर्दछ । अथवा भनौ यो आदिम साम्यवादी युग थियो जहाँ मानिस आफ्नो व्यक्तिसित नगाँसिको चीजलाई आफ्नो व्यक्तिगत बनाउने कुरासम्म पनि कल्पना गर्न सक्दैनथ्यो । क्रो–म्याग्ननको उत्पत्तिले नेण्डरथाल मानवको लोप भयो । क्रो–म्याग्नन मानव एसियाबाट युरोप, अफ्रिकामा बसाई सर्दै रह्यो । यो क्रम संगसंगै उसले खेतीपाती गर्न, अन्न जम्म गर्न, पशुपालन गर्न जस्ता विभिन्न सामाजिक क्रिया सिक्यो । यसरी एक नरबानर जंगली युगबाट उन्नत चरण हुँदै अब बर्वर युगसम्म आइपुग्छ जहाँ उसले उत्पादनको वृद्धि गर्ने तकिाहरु सिक्छ ।
अन्तमा एउटै प्रश्न बाँकि रह्यो । त्यो के हो भने होमिनिङ कसर िहोमो सेपिन्स्सम्म विकास भयो जबकि त्यहि अपुच्छमा अहिलेसम्म सु–संस्कृत समाजको विकास भएको छैन । यसको श्रय–श्रम हो । श्रमले नै होमिनिङबाट आधुनिक मानवसम्म विकास गरायो । चार खुट्टाबाट दुई खुट्टाले हिड्न खोज्नु यसको पहिलो पाइला थियो । पछि मानवरुपी नरवानर बन्यो । हात श्रमको अंग मात्र हाईन, श्रमको उपज पनि हो । श्रमद्धारा हातलाई नौला – नौलो कामहरु ग्र्न लायक पारेर, माशंपिण्ड, नसा र अधिक लामो समायावधिमा हाडहरुको विशेष विकासलाई भावी सन्तानले ग्रहण गरेर र पूर्खाहरुबाट प्राप्त उक्त कार्य क्षमतालाई नौला, झन झन अप्ठ्यारा कामहरु गर्नमा प्रयोग गरेर आम मानवीय हातले उच्च स्तरीय पूर्णता प्रदान गरेको छ, जस्ले गर्दा उसले राफलका चित्रकला, धोर्वादखेनको मूर्तिकला र पागनिनिको संगीतलाई जन्माउन सकेको छ । तर हात एउटा छुटै चीज थिएन । मानवीय हातको विस्तार–विस्तार बढ्दो पूर्णताले र सोझो भएर हिड्नका लागि खुट्टाहरुको समानान्तर विकास, परिस्थिति र वातावारण अनुकुल आफुलाइृ ढाल्ने क्षमताले र उपयुक्त पारस्परिक सम्बन्धले गर्दा शरीरका अरु अंगहरुमाथि विकासले जुन ठाडो दृश्यगत प्रभाव पा¥यो त्यो निकै महत्वपूर्ण छ । यो नै बाँनर र मानबीचकोअन्तरको कसी हो जसको उपज श्रम नै रहन्छ ।
नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि
निर्मलालाई न्याय माग्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी सावित्रीको धर्ना
बिश्व माटो दिवसको दिन आज पनौतीमा बृहत माटो जाँच शिविर कार्यक्रम सम्पन्न (भिडियो सहित)
अनेकोटको सिर्जना प्राथमिक बिद्यालयमा अभिभावक भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा ब्रिगेड ब्वाइज क्लब र एनआरटीको खेल बराबरीमा रोकियो
ओमिक्रोन भेरियन्टको सम्भावित जोखिम कम गर्न अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक